उद्घाटन प्रविष्टि के हो र यो कसरी गरिन्छ? अर्थव्यवस्था वित्त
क्लौडी क्यासलहरू | | कम्पनीहरु
खातामा रहेको सबै लेखा प्रविष्टिहरू मध्ये उद्घाटन सीट पहिलो हो र सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण। यी रेकर्डहरू हुन् जुन कुनै खास समयको लागि कम्पनीको आर्थिक र वित्तीय स्थितिमा व्यायामको सुरूमा संकलन गरिन्छ। उद्घाटन प्रविष्टि बिना लेखामा अवधि सुरू गर्न सम्भव हुँदैन, सामान्य खातामा वा कम्पनीको कुनै पनि अन्य आर्थिक लेखा रेकर्डमा।
उद्घाटन सीट कम्पनीको सम्पूर्ण लेखा चक्र सुरू गर्दछ जसको अवधि एक बर्ष हो। यसबाट, प्रत्येक आर्थिक अपरेसनहरू जुन व्यवसायले यस अवधिमा विकसित हुनेछ रेकर्ड गरिएको छ। धेरै जसो कम्पनीहरूमा, तिनीहरू प्राय: क्यालेन्डर वर्षसँग मिल्छ, जनवरी १ देखि सुरू हुन्छ र डिसेम्बर on१ मा अन्त्य हुन्छ। यसमा, प्रत्येक लोड वा सम्पत्तिहरू स be्कलन गरिन्छ, कि, आय र खर्च। यस अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, खुल्ला प्रविष्टिमा खर्च वा आय हुन सक्दैन। एक तरिकामा, शुरुवात प्रविष्टि लेजर सुरू गर्ने हो किनकि एक पटक प्रविष्टि गरे पछि, आन्दोलनहरू पुस्तकमा हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ। यसलाई कसरी गठन गर्ने र यसलाई सुरू गर्ने भन्ने बुझ्नको लागि, हामीले समर्पित लेख लेख्न जारी राख्नुहोस्।
1 पहिलो प्रारम्भिक सीटको गठन
2 पहिले नै स्थापित कम्पनीको उद्घाटन प्रविष्टि
3 सीट उदाहरण खोल्दै
पहिलो प्रारम्भिक सीटको गठन
प्रारम्भिक प्रविष्टि पहिलो खुल्ने प्रविष्टि हो कि एक व्यवसाय सुरु गरेको बेला गरिन्छ, त्यो हो, सिर्जना / सिर्जना गर्दा नयाँ व्यवसाय। त्यहाँ दुईवटा अवस्थाहरू छन् जहाँ शुरुवात प्रविष्टि हुनुपर्दछ, र यो पहिलो केस हुनेछ।
यो नयाँ पहिलो प्रविष्टिमा, साझेदारहरू द्वारा बनाइएको सबै योगदान प्रतिबिम्बित हुनेछ। तिनीहरूसँग सबै सम्पत्ति छन् र दुवै आर्थिक र रियल इस्टेट, जमिन, फर्निचर हुन सक्छ। यो सबै भाग यो "अनिवार्य" सेक्सनमा उल्लेख छ र त्यसपछि "पूंजी" शेयर पूंजीमा हुन्छ, कम्पनीको निगमनको लेख बनेको छ।
कम्पनीको निगमनबाट प्राप्त सबै खर्चहरू, जस्तै करहरू, प्रारम्भिक उद्घाटन प्रविष्टि गठन गरिसके पछि इक्विटीको रूपमा रेकर्ड गरिन्छ। यी प्रविष्टिहरू पछि, गतिविधिबाट व्युत्पन्न सबै खर्चहरू जारी राख्न सकिन्छ, जस्तै चलानीहरू, तलब, करहरू, साथै बिक्री वा सेवाहरूबाट प्रदान गरिएको प्रस्ताव।
पात्रो वर्ष पछि र लेखा चक्रको अन्तमा पुग्दा, समापन प्रविष्टि हुनुपर्दछ। खाताहरू यसमा प्रविष्टि गरिनुपर्दछ तिनीहरूलाई शून्य ब्यालेन्समा राख्न। यस तरिकाले, अर्को आर्थिक वर्षको लागि नयाँ शुरुवात प्रविष्टि सुरू गर्न सकिन्छ, नयाँलाई पुरानो मानहरू स्थानान्तरण गर्दै। उही प्रवृत्ति पछ्याउँदै, "डेबिट" खाताहरू र "क्रेडिट" खाताहरूमा दायित्वहरू उल्लेख गर्दै।
पहिले नै स्थापित कम्पनीको उद्घाटन प्रविष्टि
प्रत्येक वित्तीय वर्षको लागि पहिलो लेखा प्रविष्टि गरियो यो खोलिने सिट हो। यो समाप्ति प्रविष्टि पछि आउँदछ, जुन अन्तिम खातामा यस वर्षको अन्त्यमा बनेको हो।
उद्घाटन प्रविष्टि अघिल्लो केसमा जस्तै समान विधि पछ्याईन्छ, तर पहिले नै सिर्जना गरिएको कम्पनीबाट शुरू गरीन्छ। उपलब्ध हुन सक्ने डाटा एक केसबाट अर्कोमा फरक पर्न सक्छ, तर यो प्रायः तीन केसहरूको लागि हुन्छ। पहिलो हो क्लोजिंग एन्ट्रीबाट खोल्ने प्रविष्टिमा मानहरू हस्तान्तरण गरेर। पछिल्लो वर्षको ब्यालेन्सको साथ दोस्रो केसमा वा तेस्रो केसमा पनि कुनै डाटा छैन भने।
सीट उदाहरण खोल्दै
हामी एउटा कम्पनीको शुरुवात प्रविष्टिको काल्पनिक उदाहरण बनाउन जाँदैछौं जुन हामी «वित्त 521२१ एसएल call मा कल गर्नेछौं। गत आर्थिक वर्षको लागि बन्द हुने प्रविष्टि समाप्त गरेपछि, हामी नयाँ लेखा चक्रको लागि शुरुवात प्रविष्टि सुरू गर्न अगाडि बढ्छौं। सन्तुलनमा हामीसँग सालको अन्त्यमा हामीसँग हुन सक्छ, उदाहरणका लागि, निम्न आईटमहरू:
सक्रिय: मेसिनरी ,3.000,००० युरो। पैसा e०० युरो। ग्राहकहरू e०० युरो। स्टक 500०० यूरो।
निष्क्रिय: ठूला १,००० यूरो। 1.000०० यूरोको आरक्षण। 400०० युरो को .ण।
सम्पत्तिहरूको सबै अंशहरू "" अनिवार्य "सेक्सनमा पहिले ध्यान दिइनेछ, तब" सम्पत्ति "अन्तर्गत माथि वर्णन गरिएको दायित्वहरू तल झर्ने क्रममा नोट हुन जारी रहनेछ (किनकि यो निरन्तरता हुनेछ)।
माथि उल्लेख गरिए अनुसार, पहिलो पटक शुरुवात गर्न सकिन्छ यदि कम्पनी भर्खरै समावेश गरिएको छ। यस अवस्थामा, तिनीहरू सामान्यतया धेरै साधारण डाटा हुन्छन् किनकि त्यहाँ कुनै प्रारम्भिक ब्यालेन्स छैन र तिनीहरू प्रायः नगद वा बैंक हुन् (विभिन्न साझेदारहरूले गरेको योगदानका कारण)। हामी आफैंलाई लेखा कार्यक्रमको साथ अवस्थित कम्पनीको मामलामा पनि फेला पार्न सक्छौं। यस अवस्थामा, कार्यक्रम आफैं स्वचालित हुनेछ र अघिल्लो चक्रको समाप्तिमा उद्घाटन प्रविष्टि सुरू हुनेछ। त्यो मामलामा जब अरू कसैले यो लेखा राख्दछ, त्यहाँ अझ केहि काम छ र सबै खाताहरू बन्द गर्नु महत्त्वपूर्ण छ र त्यसपछि सुरुवात प्रविष्टि सुरु गर्नुहोस्।
अभ्यासमा, "मशिनरी" वा "ग्राहकहरू" को रूपमा कुनै सामान्य ब्रेकडाउन हुनेछैन, किनकि यो सरलीकृत गर्ने विचार थियो। सामान्यतया त्यहाँ प्रत्येक ग्राहकको लागि एक फाईल, साथ साथै कम्पनी छ कि विभिन्न सम्पत्ती को लागी एक ब्रेकडाउन हुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » negocios » कम्पनीहरु » उद्घाटन प्रविष्टि के हो र यो कसरी गरिन्छ?
Minutes मिनेटमा जीवन काम गर्दै
बेरोजगारी लाभको बारेमा सबै